ဇေမှိုင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
>waiting people and UN (stamps)
Posts Tagged ‘ ဇေမှိုင်း ’
ဇေမှိုင်း – တောမီးနဲ့ ချစ်သူများ
ဇေမှိုင်း – တောမီးနဲ့ ချစ်သူများ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ တခါက/ ကိုးဆယ်ဝန်းကျင်များထဲမှာ စံရိပ်ငြိမ် လှည်းတန်းတဲ့ လှည်းတန်းကြောင့် စံရိပ်ငြိမ်တာလား? စံရိပ်ငြိမ်ကြောင့် လှည်းတန်းတာလား? အငြင်းပွားနေမှာ မဟုတ်ပေမယ့် စဉ်းစားစရာတွေ,...
ဇေမှိုင်း – လက်ယက်တွင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၆ တပေါက်ပေါက် ကျနေတာ မျက်ရည်တွေလား? ချွေးစက်တွေလား? ငုံနေတဲ့ ရာဇဝင် တပွင့် ပွင့်ဖို့ အားစိုက်လိုက်ရတာ….. ဒီ-လက်ယက်တွင်းကလေးက သွေးစက်တွေ,...
ဇေမှိုင်း – ရေနှောက်သွားတဲ့ သက္ကရာဇ်တွေ
ရေနှောက်သွားတဲ့ သက္ကရာဇ်တွေ ဇေမှိုင်း၊ ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၄ ပျောက်သွားတာလား ရှများသွားသလားတော့ ဖြူ မဲ မသဲကွဲလိုက်ရ သမီးအမဲမလေးရေ အဲဒါ ဘ၀တဲ့ကွယ် မဲ့လိုပဲ ဟိုကမောင်းထုတ် ဒီကရိုက်ထုတ် ရလိုက်တဲ့...
ခေါင်းစဉ်ကိုနောက်မှတတ်ပါမယ် ဇေမှိုင်း၊ မတ် ၂၃၊ ၂၀၁၄ ကဗျာတွေကလည်း နှင်းဖွဲဖွဲကြားထဲက ကျကျလာတဲ့ နှင်းမိုးသီးတွေလိုပဲ နှင်းတွေအဆုပ်လိုက် အဆုပ်လိုက် မျက်စိရှေ့ ဝဲနေတာတွေ့ ပေမဲ့ ကိုယ့်ရုပ်ကြီးနဲ့ ကိုယ် နာမ်နဲ...
သူတို့ ပြောခဲ့ကြပါသည် ဇေမှိုင်း ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၄ ငိုရတာလည်း အတော်ခက်ပါတယ် ဟို မင်းကြီးက တဘ၀လုံး လှူသတဲ့၊ သမီးရော သားပါ….။ ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ် တခါတရံ မှားတာပါတဲ့...